Wararka Maanta: Khamiis, Oct 4 , 2012-Madaxweynaha Somalia oo ka qayb-galaya xuska sannad-guuradii 50-aad ee kasoo wareegtay Xorriyadda dalka Uganda
Xasan Sheekh ayaa ka mid ah madaxda 14 dal oo ka qaybgalaya dabbaal-deeggaas, sida Talaadadii toddobaadkan ka sheegay magaalada Kampala wasiirka isgaarsiinta dalka Uganda,Karooro Okurut.
Dalka Uganda ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga kumannaan askari oo qayb ka ah howgalka ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya, waxaana ciidamadoodu ay ilaalo u yihiin madaxda Soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynaha.
Sidoo kale, dabaal-degga ayaa waxaa ka qaybgalaya saraakiil ka socda Qaramada Midoobay, Bankiga adduunka, Midowga Yurub, Bankiga horumarinta Afrika iyo xubno ka socda ururro horumarineed oo caalamka ka jira.
Inkastoo aysan jirin wax war ah oo weli kasoo baxay dhinaca dowladda Soomaaliya ayaa haddana haddii uu madaxweynuhu ka qaybgalo xuskaas waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo uu safar dibadda ah u baxo tan iyo markii uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya 10-kii bishii lasoo dhaafay ee September.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa dhowr jeer ka qayb-galay dabaal-degyo loo sameynayo maalmaha xorriyadda dalalka, Uganda, Burundi, Ruwanda iyo dalal kale oo Afrikaan ah.
10/4/2012 7:02 AM EST